Uye chii chandinoita nekutiza kwangu? Dambudziko repasirese | Absolut Kufamba
Iko kupinda panzvimbo ye coronavirus Yakashandura pasi rese rakatarisa pasi. Dzimwe nyika dzakapfuura kana dzakanyudzwa muchikamu chakakomba chekutapurirana uye dzimwe nyika dzave kutanga kuona kuti kesi dzichiwanda nekuwanda mukati memiganhu yavo.
Izvo zvakatanga muChina sekutyisidzira kudiki kwave kunetsekana kukuru kwevagari vese. Iko kumhanyisa uye kureruka kwairi kunopararira uye kushomeka kwemajekiseni nekurapa zvakakonzera vanhu vanopfuura mazana maviri nemakumi mashanu ezviuru kubva kumativi ese epasi kutapukirwa uye vanopfuura zviuru gumi vakafa. Ndokusaka hurumende dzepakati penyika imwe neimwe dzichimanikidzwa kutora matanho anoshamisa.
1 Avalanche yekukanzura. Ko kutiza kwandinoita?
2 Iyo nzira yekutiza kubva kumatikiti akadhura
Avalanche yekukanzura. Ko kutiza kwandinoita?
MuSpain, chokwadi chekuti hutachiona hunopararira nekukasira kwave kureva kuti, kuti chidzivise kuramba chichiwedzera kusvika pakudonha kwehurongwa hwehutano hwenyika, Hurumende yakaraira kuti mamiriro ekutya izvo zvinomanikidza mabhawa, zvitoro, mabhizinesi kuvharwa uye zvakarambidza kufamba kwemahara kwevanhu, zvichimanikidza vagari kuti varambe vakavharirwa mudzimba dzavo.
Ichi chiyero, hongu, zvakare chinokanganisa nendege, idzo dzakatambura a avalanche yekukanzura. Zvinoenderana nemutemo weEuropean, vafambi vane kodzero yekudzoserwa kwemutengo wematikiti avo nekuda kwekuregererwa kwendege. Zvisinei nekodzero iyi, mamwe makambani anoramba kudzosera mari uye kupa dzimwe nzira, senge kudzosera ndege kana kuchinjana tikiti yevavhavha, yakaenzana nemutengo, uye kutenga imwe ndege kuenda kune imwe nzvimbo pane rimwe zuva. . Mamwe makambani, zvisinei, anongopa mukana wekumbomira kubhururuka.
La kuregererwa kwendege uye kudzoreredzwa kweiyo huwandu vatengi vakaisa mazhinji emakambani endege mune yakaoma mamiriro, kunyanya nekuda kwekushayikwa kwemari. Ndokusaka ivo vari kutsvaga dzimwe nzira senge idzo dzambotaurwa. Izvi zvinokonzerwa nemamiriro ezvinhu aya, nekuda kwevanhu vanofanirwa kudzoserwa kumusha uye nekuda kwemvura yekunzwa kuti dzakawanda dzendege dzevatengi dzendege dzakadonha, zvichiita kuti zviome kuita zvirevo. Tatarisana nepanorama iyi yematambudziko, kune vafambi vazhinji vanosarudza kusaomesera hupenyu hwavo uye vasingashandise kodzero yavo yekudzoserwa huwandu hwetikiti.
Iyo nzira yekutiza kubva kumatikiti akadhura
Chinhu chinowanzoitika kugara uchitsvaga dzendege dzakachipa dziripo. Izvo zvinofanirwa kucherechedzwa kuti iyo tikiti mutengo Zvinoenderana nemisiyano yakadai semazuva anowanikwa ekufamba, zuva revhiki rekubhururuka - kune mazuva anodhura kupfuura mamwe - nguva yekufamba, huwandu hwekumira uye nguva dzekuenda nekusvika.
Kukambaira ese mawebhu ndiyo nzira yakanakisa yekuwana iyo yakachipa pashiri. Imwe sarudzo ndeye kushandisa VPN yetikiti dzendege. Uye ndeyekuti imwe yemiparamendi inokanganisa mutengo wendege inzvimbo kubva iko kutsvaga kwacho.
Una VPN iyo chaiyo yakavanzika network kubva kwaunobatanidza kune internet. Iyi inzira yakachengeteka yekubatanidza kupfuura kubatana kuburikidza neruzhinji rwevanhu network, idzo dzisingape chengetedzo yemhando yepamusoro kune vashandisi veInternet pakurwisa kunogona kuitika VPN inonyora mapaketi edata uye inowana iyo internet kubva kune yakasiyana IP kero pane iyo chaiye. Ndosaka maVPN achibvumidza kupfuura geoblocks, nekuti rakazvimirira reneti network inokupa mukana wekusarudza imwe nyika isiri yako - mune iyi kesi, Spain. Iyo dummy IP ndiyo inoita kuti zvive nyore kune vashandisi kupfuudza makiyi. Semuenzaniso, kuChina haugone kuwana Facebook, asi kana tikabatana neinternet kuChina kubva kuVPN, ine kero ye IP, taura imwe, France, chishandiso chatiri kuedza kubatanidza chinoturikira kuti tiri muFrance kwete China uye, nekudaro, inobvumidza mukana weFacebook. Izvi zvakasarudzika zveVPNs zvakare zvinotibvumidza isu kuti tiite zviito senge kubatanidza kune vhidhiyo chikuva uye kusarudza iyo catalog yeakataura chikuva munyika umo iyo VPN yakanyorwa, pachinzvimbo chekuve nekatalog yenyika yenyika yatiri chaizvo iko.
Ndokusaka tichigona kushandisa VPN ku tsvaga ndege sekunge tiri kune imwe nyika, saka mutengo weti tikiti unogona kuderedzwa. Iye zvino iwe unongofanirwa kutanga kudhizaina mumapeji akasiyana ewebhu kuti uwane yakachipa ndege iyo inonyatsokodzera iwe nemisi, kumira ...
Izvo zvinofanirwa kucherechedzwa kuti yega yega VPN inopa kugona kubatanidza kubva kune imwe nhamba yenyika. Haasi ese maVPN anowirirana muhuwandu hwakaenzana hwenyika uye mune imwecheteyo nyika dziripo kubva kupi kugamuchira iyo IP kero, saka kana iwe uchitsvaga yakatarwa nyika, zvakanaka kuti uongorore imwe neimwe yesarudzo, kuti ugone kuwana iko kuita kwaunoda.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Absolut Kufamba » Uye chii chandinoita nekutiza kwangu? Dambudziko repasirese
Chii chekuona muSalzburg